Sintomy ny North American Rockwell OV-10D USMC & CAP FSX & P3D - Freeware
Rockwell OV-10D Bronco ao amin'ny loko misy ny Corps de la Marine (USMC) sy ny Paty Civil Air (CAP: mpanampy sivily avy amin'ny Air Force US). Modely 3D niova fo FSX format amin'ny LLS. Prepar3D V4 azo ampiasaina, dia misy feo am-bava, teboka avo lenta, animation, ordinatera mahazatra. Misaotra an'i Chris Evans noho ireo screenshots.
Momba ny fiaramanidina tena izy:
Ny Bronco OV-10 dia fanafihana an-tanety, fitaovana fandinihana ary fitarihana nataon'I Amerika Avaratra. Nandray anjara tamin'izany izy, ankoatry ny zavatra hafa, ny Ady Vietnamiana sy ny ady amin'ny mpivarotra rongony any Kolombia hatramin'ny 2015. Ny famoahana OV-10D dia natsangana ho an'ny Corps de la marin-dranomasina amerikana tamin'ny asan'ny mpanara-maso.
Ny OV-10D dia manana fiara lehibe azo ampiasaina, fantsom-pifaneranana izay afaka mitondra harona rakitra, fipoahana, lavo maimaim-poana na baomba laser, ary tanky ivelany. Ny FLIR AN / AAS-37 natsangan'ny Texas Instruments sy laser mpanaramaso dia napetraka tao amin'ny tilikambo iray eo amin'ny oron'ny fiaramanidina. Azo atao ny mifandray amin'ny basy General Electric M97 20 mm napetraka ao anaty tifitra iray eo ambanin'ny rambony fa tsy ny OV-10A. Ny fitaovana dia novolavolaina amin'ny rafitra Fikarohana sy fampandrenesana APR-39 raha ilaina, ALE-39 mpangalatra fiara ary fitaovana famerenam-bidy. (Loharano Wikipedia).
Downloads 9 086
Noforonina 9 Feb 2018
Ny modelin'i Tim Conrad, FSX format natolotry ny LLS, voaorina sy novolavolan'i Chris Evans, naverin'i Ken Glazer